Kumbiwe isidumbu sesihlobo semeya | Ilanga News
Home Izindaba Kumbiwe isidumbu sesihlobo semeya
Kumbiwe isidumbu sesihlobo semeya
Inkinga idalwe wukushayisana kwemibiko ngokufa kwaso
KUBE wumunyu emndenini wakwaNtuli eVumanhlamvu, eNkandla, izolo ngoLwesithathu ngesi-khathi amaphoyisa emba isidumbu sikaMnu Mbongeni Ntuli (61), onguninalume wemeya yaseNkandla, uMnu Thami Ntuli.
Isidumbu sikaMnu Ntuli simbiwe ngenhloso yokuthola imbangela yokushona kwakhe njengoba kuthiwa wagcina engcwatshwe ngendlela engaqondakali.
Kubikwa ukuthi umufi washona ngoMfumfu (October) nyakenye emuva kokusha nendlu. Kusolwa ukuthi umndeni kawuzange uwabikele amaphoyisa ukuthi ushone kanjani.
Kuthiwa uMnu Ntuli obesethathe umhlalaphansi ekubeni nguthisha washa nendlu elele, emu-va kwalokho waphuthunyiswa esibhedlela, kodwa kwamenela emuva kosuku engeniswe khona.
ILANGA lithole ukuthi ithumbu libhoboke ngemuva kwezinyanga ezimbili kwenzeke lesi sigameko ngesikhathi inkosikazi kamufi, uNkk Thabiso Ntuli, uMaMdunge, izama ukulungisa izinto ukuze ithole imali yomyeni wayo esebhange.
Kuthiwa uNkk Ntuli waya ema-phoyiseni eyofuna incwadi efungelwe ngokushona komyeni wakhe njengoba yayidingeka ebhange, kodwa wanqwamana nenkinga.
Amaphoyisa ambush ukuthi ushone kanjani umyeni wakhe, wawatshela ukuthi washa nendlu.
Kuthiwa ambuza ukuthi kungani bengawabikelanga ukuze kuzovulwa icala, uNkk Ntuli wathi akanalo ulwazi njengoba yena wayehleli emakhandleleni wonke amalungiselelo ngomngcwabo ayehlelwa yimeya, okuyiyona eyayithatha izinqumo.
ILANGA lithole ukuthi ngemuva kwalokho, amaphoyisa avula icala ngokushona kukaMnu Ntuli, kwa-qalwa uphenyo olugcine luwaholela ekutheni kumbiwe isidumbu sakhe ukuze kutholakale imbangela yokushona kwakhe.
Amalungu omphakathi wakule ndawo abedinwe egane unwabu, bekuthi mawawadle awafele amaphoyisa ngesikhathi sekuyombiwa isidumbu sikaMnu Ntuli.
Ngaphambi kokuba kumbiwe, kudingeke ukuba imeya iqale ikhulume namalungu omphakathi, iwancenge ukuba ehlise umoya, ayeke amaphoyisa enze umsebenzi wawo.
ILANGA likhulume nenduna yendawo, uNkk Sebenzile Nhlebela, ebikhona ngesikhathi kumbiwa isidumbu sikaMnu Ntuli.
Ithe amaphoyisa afikile kuyona eyoyazisa ngalolu phenyo, asho nokuthi kuzombiwa isidumbu.
Ithi afike achaza ukuthi okubhalwe esitifiketini sokushona kukamufi nokushiwo wumndeni kuya-phambana.
“Kungiphathe kaki ukuthi umndeni wakwaNtuli kawuzange ukwazi ukubambisana nami nje-ngenduna ngalolu daba, kawungi-bikelanga, ngize ngatshelwa ngamaphoyisa, kwayimina engiwufo-nelayo,” kusho uNkk Nhlebela.
ILANGA lishayele imeya libuza ngalolu daba yathi: “Ngoba wudaba lomndeni lolu olungathinti umsebenzi wakwamasipala, ngizocela ukungaphawuli, kuzophawula elinye ilungu lomndeni.”
UMnu Mthokozisi Kunene, oyilungu lomndeni wakwaNtuli, uthe kungamampunge okushiwo ngamaphoyisa ukuthi kabalubikanga udaba emaphoyiseni.
“Saya emaphoyiseni futhi kwa-kuyimina nomunye umfowethu. Sasiyalelwe yiyona imeya ukuthi siyolubika emaphoyiseni udaba. Umalume washona ngemuva kokusha nendlu kade kuwumlindelo ekhaya,” kusho uMnu Kunene othe bazolinda imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, ukuqinisekisile ukumbiwa kwesidumbu sikaMnu Ntuli, ngemuva kokuvulwa kwecala.
Uthe kuzothathwa izicubu ziyohlolwa ukuze kutholakale imbangela yokushona kukamufi.
Amaphoyisa athe bahubhuza ilumbo abomdeni uma bethi bawabikela ngoba kwathi uma sebebuzwa ukuthi babike kubani, bazama ukuchaza ngobude nangesiqu sephoyisa abathi bakhuluma nalo.
Previous articleSebenama-app abo abakamasikandi
Next articleUfata usolwa ngokweshela abasuke beyovuma izono